Waxbar gabadha oo ciribtir faqriga: Xal-u-helidda caqabadahaha gabdhaha kahoryimaada dhanka waxbarashada (Taxanaha 5aad – dhegayso) – Radio Daljir
Waxbar gabadha oo ciribtir faqriga: Xal-u-helidda caqabadahaha gabdhaha kahoryimaada dhanka waxbarashada (Taxanaha 5aad – dhegayso)
Oktoobar 31, 2019 6:47 g 0
Barnaamijka maanta waa kor-u-qaadida aqoonta gabdhaha iyadoo la yaraynaayo caqabadahaha kaga yimaada degaanka, dhaqaalaha, iyo aqabadaha la xidhiidha tacliintooda. Sidoo kale in laga dhiso oo loo diyaariyo nolosha mustaqbalka iyo kala gudubka waxbarashada ee heerarka kala duwan ee Primary iyo Secondary ba.
Barnaamijku waxa uu gabdhaha ku dhiirigalinayaa inay waxbartaan oo dhamaystiraan waxbarashadooda. Maanta waxaa marti barnaamijka noogu ah culimo iyo Nabaddoono, muhiimaduna waa Waxbarashada Gabdhaha iyo amaankooda iskuulka iyo markay iskuulka u socdaan ama ka soo baxaan.
Maqaalo Kale 303 Wararka 20789
Golaha Wasiirrada oo ansixiyay ku tala galka miisaaniyadda Dawladda ee Sannadka 2020 (Daawo)